Nakhu Okuye Phansi Emcimbini Wabafazi Abapheki Abakhulu eDelhi - Abaphumelele
Nakhu Okuye Phansi Emcimbini Wabafazi Abapheki Abakhulu eDelhi
Ngenhloso yokukhombisa inqwaba yabapheki basekhaya kanye nokuthokozisa okuphekwayo, uFemina uhlanganise umcimbi othokozisayo wabo bonke abathandi bokudla. UFemina Super Chef, umcimbi obehlinzeka ngeplatifomu, ukuholwa nokusekelwa kwabapheki basemakhaya baseNdiya kufakazele ukulandela okuthe xaxa ezinkundleni zokuxhumana nabantu abavela kuzo zonke izizinda zempilo behlanganyela kulo mcimbi.
Isiphetho esihle salolu hlelo esenzeke e-Ambience Mall eDelhi, eGurgaon, kube ngubufakazi bezinyawo zabathandi bokudla, abathanda ukupheka kanye nochwepheshe bokudla. Umcimbi uthole okufakiwe online kubathandi bokudla abanethalente, nge-aijm yokuthola ukuthi umpheki oyedwa wasekhaya owakhombisa amakhono nobuntu bakhe ngokudla.
Phambilini besicele ababambiqhaza baseDelhi ukuthi bahambise okufakiwe ngokufaka izithombe noma amavidiyo wanoma isiphi isidlo abasipheka ezinkundleni zokuxhumana noma basithumelele sona. Bacelwe ukuthi babelane ngeresiphi kumagama-ncazo bese bethenga i-Femina India futhi basebenzise i-hashtag #FeminaSuperchef.
Sijabule kakhulu ukuthi uChef Ranjan Chowdhary waseCremica noChef Rajesh Sharma, Umpheki oPhethe, iRoseate New Delhi njengejaji elihlonishwayo lomzuliswano wokugcina.
Ngomjikelezo wokuqala- chaat inselelo - ababengenele umncintiswano ababili kwakudingeka balungiselele ukuhlangana besebenzisa izithako ezivela ebhokisini eliyimfihlakalo. Kwakudingeka bathuthukise ukunambitheka kwesitsha ngokufaka i-LG Hing kuresiphi yabo. Ngenselelo elandelayo, okwakuwumjikelezo wesaladi, abadlali ababili ababencintisana kwakudingeka benze isaladi besebenzisa umkhiqizo weCremica. Ngenselelo yesithathu, abancintisi ababili bakhethwa ukwenza i-shahi paneer nge-twist. Ngemuva kwayo yonke le mizuliswano emithathu, ijaji elihlonishwayo lathatha abadlali ababili ababethunyelwe emzuliswaneni wokugcina, owawubandakanya ukupheka uphudingi waseNdiya.
Ngemuva kwakho konke ukunambitha amajaji athweswe umqhele u-Ila Gupta njengoFemina Super Chef, eDelhi.
'Lo mcimbi ubuhlelwe kahle kakhulu futhi wenziwa, abangenele bakhombisa amakhono amakhulu okupheka. Ngithanda ukuhalalisela iqembu lakwaFemina ngomcimbi omuhle kangaka'- Chef Ranjan Choudhary waseCremica
K.L. UVerma, oyiManaging Director, uSunflame uyabelana, “Ukupheka kuwubuciko noThalente. Kodwa-ke, ngokujwayelekile ukupheka eNdiya kuthathwa njengomsebenzi ojwayelekile futhi umninikhaya ubeka umzamo omkhulu nesikhathi ekhishini ukudala impilo engcono yomndeni wakhe ngaphandle kokubona ukuthi unekhono kangakanani. Ngakho-ke, sizwe ukuthi i-Femina Super Chef iyipulatifomu eyingqayizivele engagcini ngokubona amakhono okupheka njengethalenta kepha futhi enikeza laba besifazane ithuba lokuzwa isasasa lombukiso wangempela wokupheka empilweni yangempela. Ngokuyisisekelo ukuzingelwa kompetha wokudala ophakeme kunabo bonke ezweni. I-Sunflame iphumelele ukungena ezigidini zekhishi ngokusebenzisa izitsha zayo zokupheka nezinye izinto ezisetshenziswayo futhi manje ngalo mbukiso, sinomuzwa wokuthi sizokwakha ubudlelwano nobuso obubodwa nezigidi zalabo makhaya abanekhono. ”
'Kube wudumo olukhulu nesikhathi senjabulo nokuziqhenya ngathi ukuhlangana nenselelo ethokozisayo yokupheka njengoFemina Super Chefs. Thina, e-Ambience Mall, besilokhu sikholelwa ekuhlanganiseni abantu nemiphakathi ukuzobungaza ithalente. Bonke ababambi qhaza ababelana ngamakhono abo okupheka bakhanyisile futhi bakhuthaza abaninikhaya abaningana nabapheki basekhaya ukuba bahambe ibanga elingaphezulu. I-Ambience Mall nethimba lethu lonke libathumelela impumelelo enkulu nezifiso ezinhle, 'kusho u-Arjun Gehlot, umqondisi we-Ambience Mall.
Ngokusebenza ngempumelelo, sithanda ukubonga ozakwethu i-Sunflame, i-LG Hing kanye nabaxhasi esikanye nabo iCremica ne-Ambience Malls.
ungamisa kanjani ukuwa kwezinwele kwabesifazane
amathiphu okwandisa ukukhula kwezinwele
uwoyela we-alimondi wokukhula kwezinwele ngaphambi nangemva